« Fifosana people »
Naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora ilay mpanakanto mpitantana ilay fikambanana ao anatin’ny facebook « Fifosana people ». Raha tsiahivina, ny herinandro teo no notazomina nanaovana famotorana tetsy amin’ny sampan’ny polisim-pirenena misahana ny heloka bevava ity mpanakanto ity. Resaka fanalam-baraka no niampangana azy tamin‘izany.
Teratany karana iray no nisy naka an-keriny tany Ampasimazava Toamasina ny faran’ny herinandro teo. Araka ny voalaza, olona dimy nitondra fitaovam-piadiana mahery vaika no naka an-keriny ity karana ity tamin’izany. Mbola tsy fantatra ny toerana nitondran’ireo olon-dratsy ity olona nalainy an-keriny ity hatramin’izao. Araka ny volaza dia teo imason’ny fianakaviany no nakan’ireo olon-dratsy azy tamin’io fotoana io.
Antoko politika maromaro no fantatra fa hanao hetsika amin’ny fahatsiarovana ny andron’ny faha-7 febroary ho avy izao. Isan’ny fantatra fa hanao hetsika amin’io andro io dia ny eo anivon’ny Dinika ho amin’ny Fanavotam-Pirenena (DFP). Tsy mbola nandrenesam-peo kosa hatramin’izao ireo mpomba ny filohan’ny tetezamita teo aloha.